ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: September 2009
သြော်....ဘာလိုလိုနဲ့ စက်တင်ဘာလကုန်ခဲ့ ပြီ....
မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ်....ဖတ်မိတဲ့ ...ကြိုက်မိတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ
ကိုသိုးထိန်း ထံမှခွင့် တောင်းကာ အားလုံးအတွက်တင်ပြလိုက်ပါတယ်...
တစ်ဘ၀လုံး တစ်ခါမှမဟောင်ဘူးတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်
ချောင်ပိတ်ရိုက်ယင်တောင် သွားဖြီးပြရုံလောက်ပဲ တတ်နိုင်တဲ့ ကောင်
ကြောင်တွေရဲ့ လှောင်ပြောင်မှုကိုအမြဲခံရလေ့ ရှိတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်...
ခွေးဆိုတော့ ကာ လက်သည်းလည်းမ၀ှက်တတ်ဘူးလေ
ကိုယ့် ကို ခွေးအမျိူးကောင်းသားသမီးများက အရောတ၀င်မရှိ
ဘယ်သူ့ ခွေးနဲ့ခွေးသန်းများကမှလည်း အဖက်မလုပ်
သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား ခွေးဇတ်ခင်းသူများကြားမှာ
အထူအပါး နားမလည်ခဲ့ 
ခွေးကြီးမျိူးကြီးမိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတဲ့အထက်တန်းစားခွေးမဟုတ်တော့ 
အခြေအနေပေးယင်တောင် ကြုံသမျှ ဖုံမထချင်တဲ့ ခွေးတစ်ကောင်
အမြင့် ကိုလည်း မမှန်းသလို အလှမ်းတွေလည်းမကျယ်ခဲ့ တော့ 
ခွေးစလွယ်တွေလည်း မရဖူးသလို ခွေးကျလည်းမကျဖူးပါဘူး
ခွေးနှစ်မှာ မွေးလို့ခွေးဖြစ်ကြေးဆိုယင်တော့ 
ခွေးခွေးချင်း တော်သလင်းလမှ ရှင်းမယ်....
ကဗျာတွေ၊စာတွေသိပ်ကြိုက်လေ့ မရှိတဲ့ ကျွန်တော်...
ဒါပါနဲ့ ဆိုဖတ်မိ၊ ကြိုက်မိတဲ့ ခေတ်ပေါ် ကဗျာဆရာနှစ်ဦးရှိသွားပြီ...
စကားလုံးတွေနဲ့ အမြဲလင်းလက်နေတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ကိုသိုးထိန်းတို့ ပဲပေါ့ ...
Posted by Unknown | at 1:05 PM |5comments
Labels: poem :
ကမ္ဘာ့ ရင်သားအကြီးဆုံးအမျိူးသမီး ( ၁၀ ) ဦးပါတဲ့ ....
နံပါတ် ၁၀ ကစလို့ အောက်ဆုံးကနေပြောင်းပြန်စီထားပါတယ်...
လေဒီများကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမိတယ်ဆိုယင်တော့ ခွင့် လွှတ်စေချင်ပါတယ်...
သူမကတော့၁၉၉၉ ခု နှစ်အထိ ကမ္ဘာ့ ရင်သားအကြီးဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ သူပေါ့ ....ထိုမျှလောက်ကြီးမား
အောင်သဘာဝအတိုင်းမဟုတ်တဲ့ နည်းလမ်းများအသုံးပြုခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်... ၂၀၀၀ ခုနှစ်မတ်လမှာ
ကွယ်လွန်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ သူမထက်အသက် ၁၅ နှစ်ကျော်ကြီးတဲ့Eric Vigne ဆိုသူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ...
ဖြစ်ပါတယ်... ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ ပါတယ်..
မြောက်များလှစွာသောတီဗီအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ခဲ့ ရပြီးနာမည်အကျော်ဆုံးကတော့ ဘီယာဗူးတွေ
ကိုသူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ရင်သားတွေနဲ့ ပိပြားအောင်ထုချေပြခဲ့ တာပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါ
ဘရာဇီးနိုင်ငံဖွား၊အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ် မှာနေထိုင်ပါတယ်တဲ့ ... ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာမွေး
ဖွားခဲ့ တာပါ...တမင်သက်သက်ကြီးမားအောင်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတဲ့ ရွှေရင်အစုံကြောင့် ထင်ရှားကျော်
ကြားပါသတဲ့ ... ၂၀၀၈ ခုမေလမှာတော့၈ ကြိမ်မြောက် ခွဲစိတ်အပြီးမှာ စံချိန်တင် ရင်သားဆိုဒ် 34FFF
ဖြစ်လာပါသတဲ့ ...( ဘာတွေ၊ဘယ်လိုတိုင်းသလဲတော့ မသိ ...)
၂၀၀၉ ၊ ဇန်န၀ါရီ မှာတော့ဇာတိချက်ကြွေ၊ဘရာဇီးမြေ မှာနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်
တာ 38 KKK ဆိုဒ် ပါတဲ့ ...
သူမကတော့ အဖော်အချွတ်ပြသတာတွေမလုပ်ပါဘူးတဲ့ ....ပြီးတော့ သူမလက်ထပ်တဲ့ သူကလည်း
သူမကလည်းမော်ဒယ်တစ်ယောက်ပါပဲတဲ့ ...အခုသိပ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ အမျိူးသမီးအဆိုကျော်
Rhianna နဲ့ နာမည်ချင်းဆင်တူပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူတို့ ကိုဝိုင်းနေတဲ့ လူတွေတွေကို
သူမရဲ့ ဂုဏ်ထူးဘွဲ့ ထူးတွေကတော့ အံ့ မခန်းပါပဲ...အဖော်အချွတ်မှာတော့ ဗိုလ်မထားပါဘူးတဲ့ ...
တယ်...အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ New York မြို့ ၊ Long Island မှာနေထိုင်ပါတယ်...
သူမသည်လည်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတဲ့ အရွယ်လွန် ၊ ရင်သားမဟာများကြောင့် လူသိထင်ရှားကျော်ကြား
ရွှေရင်တစ်ခုကို ပေါင်နှစ်ဆယ်လေးပါတယ်တဲ့ ...ဘုရား၊ဘုရား....
သူမရဲ့ ရင်သားများကတမင်တကာပြုပြင်ဖန်တီးထားလို့ သူမအနေနဲ့ အဆိုပါရင်သားမျိူးအတွက်သတ်
မှတ်တဲ့ စနစ်မရှိခဲ့ သေးတာကြောင့်၂၀၀၃ ၊ သြဂုတ် လအထိ ကမ္ဘာ့ အံ့ ဖွယ်မှတ်တမ်းမှာတရားဝင်
အတည်မပြုခဲ့ ရသေးပါဘူး...အခုတော့ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်ကိုဖန်တီးသတ်မှတ်ပြီးတာမို့ သူမသည်
လည်းကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးရင်သားပိုင်ရှင်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း ( official certificate ) ရရှိသွားခဲ့ ပါပြီ...
သူမရဲ့ ရင်သားအတိုင်းအတာက တော့ ...၆၀.၅ လက်မ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ....
အင်း...ဖော်ပြထားချက်အရကတော့ .....သူမရဲ့ အလုပ်အကိုင်က ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပါပဲခင်ဗျာ...
အရွယ်မရောက်သေးသူခလေးသူငယ်များနဲ့ လားလားမှမဆိုင်တဲ့လူကြီးကြိုက်ဖျော်ဖြေရေးရုပ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ ...သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ကယ့် ကိုကြီးတဲ့အမျိူးသမီးကြီးပေပဲကိုး....
မစ္စချမ်း ( မြင်သူ..ချစ်သူ၊ချောမောလှပသူလို့ ဘာသာပြန်ယင်လွန်အံ့ မထင်...ဟဲဟဲ...)ကတော့ 
အစ်ကိုကာလသား၊ဘဘများအကြိုက်မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးမော်ဒယ်အဖြစ်သူမရဲ့ ဝင့် ကြွားစွင့် ကား
တဲ့ ရင်သိမ့် တုံရွှေရင်အစုံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ တယ်ဆိုပဲ...
ဆက်ကာဆက်ကာကြီးထွားစေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ထည့် သွင်းခွဲစိတ်ပြုပြင်ယူခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါ
သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတော့ သူမရဲ့ ရင်သားဟာ 153 XXX ဆိုဒ်ပါတဲ့ ( လုပ်ပြန်ပြီ...
ဘယ်လောက်ကြီးလို့ ဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလည်းမသိ...) သို့ သော်ခန့် မှန်းနိုင်ရန်ကတော့ ရင်သား
တစ်ဖက်ကို ၂၆ ပေါင် လေးပါတယ်တဲ့ ....သူမရဲ့ ပြုပြင်ထည့် သွင်းထားတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့် 
သူမဟာရင်သားကြီးထွားစေဖို့ ခွဲစိတ်မှုသုံးကြိမ်လုပ်ခဲ့ ရပါတယ်....
ဒါကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပုံမှန်သွားရောက်ပြသနေရပြီးမလိုအပ်တာတွေပြုပြင်ဖယ်ရှားရတယ်ဆိုပဲ...
အန္တရယ်ကြီးလွန်းတဲ့ အဆိုပါဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ရင်သားအရွယ်အစားကြီးအောင်ပြုလုပ်တာကိုအမေ
မားတဲ့ ရင်သားရှိသူအမျိူးသမီးတွေဟာအနည်းငယ်ပဲရှိပါတော့ တယ်တဲ့ ..
ထိုမျှလောက်ကြီးမားလေးလံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကြောင့် ခါးတွေဘာတွေမနာဘူးလားလို့ သူမ
ကိုမေးမြန်းခဲ့ ရာမှာ...လေ့ ကျင့် ခန်းလုပ်နိုင်ဖို့ ကအဓိကပါပဲ ( အကျင့် ဖြစ်သွားယင်ပေါ့ နော်...) လို့ 
သူမကပြန်ဖြေခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ...
သူမအကြောင်းတော့ သိပ်မသိရပါဘူး...အင်း...ဒါပေမယ့် စာရင်းအရတော့ ဒုတိယမြောက်အကြီးအမား
ကဲ...ဒါကတော့ နောက်ဆုံးပိတ်...အိတ်နဲ့ လွယ်...( တစ်ကယ့် ကို ဂုံနီအိတ်၊ ဆာလာအိတ်နဲ့ ထည့် 
ရမှာပါပဲ ...) လက်ရှိတရားဝင် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးရင်သားပိုင်ရှင်ပါတဲ့ ....
တစ်ကယ်ဆိုယင်အဲဒီအိတ်တွေနဲ့ တောင်ဆန့် မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ...
Posted by Unknown | at 6:25 AM |3comments
Labels: odd news :
တို့ ရဲ့သီးခြားကမ္ဘာလေးထဲ မှာ...
လူပုလေးများရဲ့ ကမ္ဘာ...လူပုလေးများရဲ့ ရွာ...
သာမာန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားထွားကြိုင်းသူတွေရဲ့ ကဲ့ ရဲ့ နှိမ်ချဆက်ဆံခြင်းခံ၇လေ့ ရှိလို့ အဲဒီဒဏ်မှလွတ်
အောင်မိမိတို့ နဲ့ ဘ၀တူလူပုလေးများစုပေါင်းတည်ထောင်ဖန်တီးထားတဲ့ လူပုလေးများချည်းပဲနေတဲ့ 
နေရာ၊၇ွာကလေးဟာအခုတော့ ဖြင့် ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားများအတွက်စိတ်ဝင်တစားလာရောက်
လေ့ လာကြည့် ရှု၇တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီတဲ့ ....
အရပ် ၄ ပေနဲ့၃ လက်မ ကျော်သူတွေလာရောက်နေထိုင်ခွင့် မပြုပဲတားမြစ်ထားတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ 
တောတောင်ထူထပ်တဲ့ ဒေသက နေထိုင်သူပေါင်း ၁၂၀ ရှိတဲ့ လူပုလေးများရဲ့ ရွာကလေးမှာသူတို့ ရဲ့ 
ကိုယ်ပိုင်လူပုရဲတပ်ဖွဲ့ နဲ့ လူပုမီးသတ်အဖွဲ့ တို့ ပါဖွဲ့ စည်းထားရှိပါတယ်တဲ့ ...
အခုတော့ အဆိုပါလူပုလေးများလည်းစီးပွားရေးခေတ်အမြင်ကျယ်ကာသူတို့ ရဲ့ ရွာကလေးကိုစိတ်ကူး
ကာပုံပြင်ဆန်တဲ့ ဇတ်ကောင်များကဲ့ သို့ ဝတ်စားဆင်ယင်နေထိုင်ကြပြီးအပန်းဖြေပန်းခြံအဖြစ်ပြောင်း
တရုတ်နိုင်ငံ၊တောင်ပိုင်း ၊ ကူမင်းမြို့ ( ရွှေပြည်ကြီးနဲ့ နီးနီးလေးပေါ့) အနီးကထိုရွာကလေးရဲ့ ပြောရေး
ဆိုခွင့် ရှိသူ ဖြစ်တဲ့ Fu Tien က ” ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားသေးလို့ သာမာန်လူတွေကသူတို့ ရဲ့ မြင့် 
မားထွားကြိုင်းမှုကိုအခွင့် ကောင်းယူပြီးကျွန်တော်တို့ ကိုတွန်းထိုးအနိုင်ကျင့် ကြပါတယ်...အခုတော့ 
ဖြင့် ဒီရွာမှာတစ်ခြားအကောင်ကြီးတဲ့ သူဘယ်သူမှမရှိပဲကျွန်တော်တို့ ချည်းမို့ အားလုံးဟာညီတူမျှတူ
မို့ အဆင်ပြေသွားရပါပြီ...” လို့ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
တို့ ရဲ့ ကမ္ဘာကိုတို့ တည်ဆောက်မယ်ပေါ့ နော်....
A DWARF community who set up their own village after suffering discrimination from "big people" have turned themselves intoaTOURIST attraction.
People taller than 4ft 3ins tall were BANNED from entering the private mountain commune of 120 residents, which has its own police force and fire brigade.
But now the group have branched out — and turned their village intoatheme park by building mushroom houses and living and dressing like fairy tale characters.
Fu Tien,aspokesman for the tiny group in Kunming, southern China, said: "As small people we are used to being pushed around and exploited by big people. But here there aren't any big people and everything we do is for us."
Posted by Unknown | at 4:09 AM |2comments
Labels: News : Austiantimes.at
Four South African women to marry the same man
ဓါတ်ပုံတွေထပ်တွေ့ လို့ ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်...
သူတို့ သမီးအချောအလှလေးတွေကြည့် ရတာပေါ့ ....ထပ်မံဖော်ပြတွေ့ ရှိဖတ်မိရတာကတော့ 
သတို့ သားဖြစ်သူဟာသတို့ သမီးလေးဦးထဲက Thobile Vilakazi နဲ့ လက်ထပ်ထားတာ
၁၂ နှစ်ရှိခဲ့ ပြီးသားသမီး ၁၁ ဦးထွန်းကားခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါတယ်...အခုတော့ ပထမ လေဒီကြီးစိတ်
ကျေနပ်အောင်သူ့ ကိုပါတစ်ပြိုင်တည်းထပ်ပြီးလေးဦးပေါင်းပြီးမင်္ဂလာပွဲလုပ်တာပါတဲ့ ....
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံက KwaZulu-Natal အနွယ်ဝင်အမျိူးသမီးလေးဦးတို့ ဟာယောကျာင်္းတစ်ယောက်
ထဲကိုတစ်ပြိုင်နက်ထဲအရူးအမူးချစ်မိခဲ့ ကြလို့ ထိုသူနဲ့ လာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာအားလုံးစုပေါင်းကာတစ်
Ntlane ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Milton Mbele ဟာ သူ့ ရဲ့ လှပ
ချောမောတဲ့ သတို့ သမီးလေးယောက်စလုံးဘယ်ညာခြံရံကာမင်္ဂလာစကားနဲ့ သစ္စာထားတော့ မှာဖြစ်ပါ
သတို့ သမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့Thobile Vilakazi, Zanele Langa, Baqinisile Mdlolo နဲ့Smangele Cele
တို့ ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးဘာမှတွေဝေမနေကြပါဘူးတဲ့ ....အသက် ၃၅ နှစ်နဲ့၂၂ နှစ်အတွင်းရှိ
ကြတဲ့ အဆိုပါမိန်းမချောလေးဦးတို့ ကတော့ သူတို့ ရဲ့ Ndaka ကမန်နေဂျာဖြစ်သူ ခင်ပွန်းနဲ့ တစ်သက်လုံး
သတို့ သား Mbele က Vilakazi အတွက် နွား ၁၀ကောင် ၊ Langa အတွက် နွား ခုနှစ်ကောင် ၊ Mdlolo
နဲ့Cele တို့ အတွက် နွား ရှစ်ကောင်စီပေးပြီးတင်တောင်းခဲ့ တာပါတဲ့ ...( တယ်လဲမျက်နှာကြီးတဲ့ နွား
သတို့ သမီးများရဲ့ ကိုယ်စား Cele က ” ကျွန်မတို့ အားလုံးသူ့ ကိုလက်ထပ်တာဘာမှအထူးအဆန်းတစ်
ခုအနေနဲ့ မမြင်မိပါဘူး...ကျွန်မတို့ ကသူ့ ကိုချစ်လို့ အားလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ချိန်တည်းလက်ထပ်မင်္ဂ
လာဆောင်ဖို့ သဘောတူခဲ့ ကြတာပါ....( နွားတွေကိုချစ်လို့ တော့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူးနော်....) ......
လက်ထပ်စာချူပ်တွေဘာတွေရှိရှိမရှိရှိအရေးမကြီး၊ကိစ္စမရှိပါဘူး....အဓိက ကတော့ အဓိကပါပဲပေါ့ ...
အဲ ...သူကကျွန်မတို့ ကိုချစ်ခင်ကြင်နာဖို့ သာအဓိကပါပဲ....” လို့ ပြောသွားခဲ့ ပါတယ်...
ဘာကြောင့် အခုလို အမျိူးသမီလေးယောက်စလုံးနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်းလက်ထပ်ရတာလည်းလို့ မေးခဲ့ 
တဲ့ အခါ သတို့ သားလောင်း Mbele က ” မိန်းမအများအပြားယူကြတာကိုကကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရိုးရာယဉ်
ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲ...ထူးခြားတာဆိုလို့ သူတို့ အားလုံးနဲ့ တစ်ချိန်ထဲလက်ထပ်တာပါပဲ ...ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို
လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ အားလုံးကိုချစ်တယ်လေ...ဒီမင်္ဂလာပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ 
ကတော့ လူတွေကအံ့ သြနေကြတယ်...သူတို့ အားလုံးကဒီသမိုင်းဝင်၊သမိုင်းတွင်မယ့် မင်္ဂလာပွဲကို
မျှော်လင့် စောင့် စားနေကြတယ်ဗျ....” လို့ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ရိုးရာဝတ်စုံနဲ့အမှတ်တရ....
Mbele ဟာ နွားပေါင်း အကောင် ၁၀၀ နဲ့ဆိတ် အကောင် ၂၅၀ တို့ ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်...
အင်း....အာဖရိကသားဖိုးကံကောင်းတော့ တစ်သက်လုံးကံကောင်းမလားဆိုတာစောင့် ကြည့် ရမှာ
Four KwaZulu-Natal women are madly in love with one man and will all walk down the aisle with him on Sunday.
Thobile Vilakazi, Zanele Langa, Baqinisile Mdlolo and Smangele Cele are unfazed. The beautiful quartet have vowed to marry their Ndaka municipal manager husband come rain or shine. The women are aged between 22 and 35 years.
Mbele paid 10 cows for Vilakazi, then seven for Langa and eight each for Mdlolo and Cele.
Asked why he was marrying all four at the same time, Mbele said: “Marrying many wives is our culture. However, what is different is to marry all of them at once. I am doing this because I love all these women.” Mbele said the response he got about his wedding plans was amazing. “Many people are looking forward to see me making history.” Mbele owns about 100 cows and 250 goats.
Posted by Unknown | at 1:14 AM |3comments
Australian man abandons family for death row dog
သူ့ မိသားစုကိုစွန့် ပစ်ပြီးဆိုးလွန်းလို့ မြို့ တော်ကောင်စီကသတ်ပြစ်ဖို့ အမိန့် ပေးခဲ့ ပြီးတိရိစ္ဆာန်ထိန်း
သိမ်းရေးစခန်းမှာအသတ်ခံတော့ မယ့် သူ့ ရဲ့ အချစ်တော်ခွေးနဲ့ အတူထွက်ပြေးသွားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
Mt Gambier အနီး Moorak မြို့ က အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ Ronnie Gilbertson ဟာ သူ့ အချစ်
တော်Staffordshire မျိူးစပ် Max အမည်ရှိခွေးကြီးနဲ့ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုအကူအညီ
ဒါပေမယ့် အသက် ၃၂ နှစ်ရှိ ဇနီးဖြစ်သူ Fiona Harvey က အပျော်တမ်းလက်ဝှေ့ ချန်ပီယံဟောင်းဖြစ်
တဲ့ သူမယောကျာင်္းဟာသူ့ ခွေးကိုသူ့ သားသမီးတွေနဲ့ ထပ်တူချစ်တာမို့ သူမအနေနဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ 
လုပ်ရပ်ကိုအပြည့် အ၀ထောက်ခံအားပေးပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
” သူဒီလိုလုပ်သွားလို့ ကျွန်မသူ့ ကို ( Ronnie ) ဗွေမယူပါဘူး...သူ့ သားသမီးတွေလည်းဒီလိုအ
သက်ဘေးအန္တရယ်နဲ့ ကြုံလာယင်သူဒီလိုပဲလုပ်လိမ့် မယ်လို့ ကျွန်မမျှော်လင့် ပါတယ်...” လို့ ဇနီးဖြစ်
သူ Ms Harveyကသူမရဲ့ မိဘများရဲ့ နေအိမ်ကနေ မနေ့ ကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
အသက် နှစ်နှစ်ရှိသမီးလေး Kloe နဲ့၁၁ နှစ်အရွယ်ရှိ သားလေး Kobi တို့ ကလည်းအလုပ်အကိုင်အ
တည်တကျမရှိပဲကြုံရာကျပန်းလုပ်နေခဲ့တဲ့ သူတို့ ဖခင်အတွက်စိတ်ပူနေကြပါတယ်လို့ သူမကပြောခဲ့ ပါ
တယ်...အထူးသဖြင့်သမီးလေးကသူ့ အဖေကိုအလွန်သတိရနေလို့ ကျွန်မဖြင့် ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိူးဘယ်
တော့မှနောက်မဖြစ်ပဲသူ တို့ ဖခင်အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ရောက်လာနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ် လို့ 
အမည်မဖော်ပြလို တဲ့Mr Gilbertson ရဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကတော့ သူမရဲ့ သားဖြစ်သူဟာလွန်ခဲ့ တဲ့ ရှစ်နှစ်
ကသူမခင်ပွန်း ( သူ့ ရဲ့ ဖခင် ) ကွယ်လွန်ခဲ့ စဉ်ကတည်းကအဆိုပါခွေးကိုအဖော်ရအောင်ဝယ်ခဲ့ တာပါ
လို့ ဆိုပါတယ်...သူဟာသူ့ ခွေးကိုဘယ်လိုအန္တရယ်တွေနဲ့ ပဲတွေ့ တွေ့ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်သွားမယ်
လို့ ဆုံးဖြတ်၊သစ္စာဆိုခဲ့ တာပါ...အခုတော့ သူ့ ကတိသစ္စာအတိုင်းသူလိုက်နာတာပါပဲ....
သူ့ ခွေး Max ဟာ ဆိုးလွန်းလို့ အိမ်နီးချင်းခွေးတစ်ကောင်ကိုသေလုမြောပါးကိုက်ခဲ့တာကြောင့် ခရိုင်
အုပ်ချူပ်ရေးကောင်စီက သတ်ပစ်ဖို့ အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ပါတယ်...သူဟာသူ့ ခွေးအသတ်ခံရမယ့် ရေးမှ
လွတ်မြောက်ဖို့ ရှေ့ နေတစ်ယောက်ငှားရမ်းခဲ့ တာအပါအ၀င်ဒေါ်လာ ၆၀၀၀ ကျော်အကုန်အကျခံပြီး
ခရိုင်အုပ်ချူပ်ရေးကောင်စီနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြိုးစားခဲ့ ပါတယ်...ဒါပေမယ့် အုပ်ချူပ်ရေးအဖွဲ့ ကသူ့ ရဲ့ 
ခွေးဟာယခင်ကလည်းအခြားခွေးတွေနဲ့ ကိုက်ပြီးဒါဏ်ရာအနာတစ်ရဖြစ်စေခဲ့ ပြီးလွန်ခဲ့ တဲ့၂၀၀၅ ခု
နှစ်ကလည်းသူ့ အိမ်အနီးယာတောကသိုးနှစ်ကောင်ကိုလည်းကိုက်သတ်ခဲ့ လို့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်
အလွန်ပဲအန္တရယ်ကြီးကြောင်းဆုံးဖြတ်ကာအယူခံလွှာကိုသြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ကပယ်ချခဲ့ ပါတယ်....
သူ့ ခွေးကြီး Max ကို Mr Gambier မှာရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ရေးစခန်းမှာထားရှိခဲ့ ပြီး
လွန်ခဲ့ တဲ့ တနလာင်္နေ့ ကအဆုံးစီရင်ရမှာပါ....သူ့ ခွေးကြီးကိုသတ်ဖို့ မိနစ်အနည်းငယ်အလိုမှာပဲ သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းတဲ့Mr Gilberton ဟာ ထိုစခန်းအဆောက်အဦးရဲ့ သံဆူးကြိုးကိုဖြတ်တောက်ပြီး
အထဲကိုခိုးဝင်ကာခွေးကြီး Max ကိုကယ်ထုတ်ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ ပါတယ်...အဲဒီကတည်းက
သူ့ ကိုမတွေ့ ရတော့ တာ အခုအထိပါပဲ...သူဟာအခုဆိုယင်ခွေးကိုသေဒါဏ်ပေးထားတဲ့ သူ့ ပြည်နယ်က
နေတစ်ခြားပြည်နယ်ကိုရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ရပါတယ်တဲ့ ...
သြော်...ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုယင်တောင်သဲထိတ်ရင်ဖိုစွန့် စားခန်းဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တော့ ဖြစ်လောက်တယ်
သူ့ ရဲ့ ခွေးအပေါ်မှာထားတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသံယောဇဉ်ကတော့ စာတင်လောက်ပါတယ်...
ဒါကြောင့် လဲသတင်းစာထဲမှာပါတာပေါ့ လေ....
A father has abandoned his young family and is on the run after breaking his pet dog out of death row minutes before it was to be destroyed. Ronnie Gilbertson, 41, of Moorak, near Mt Gambier, and his Staffordshire-cross, Max, have gone into hiding, promptingapolice call for help in tracking them down.
But Mr Gilbertson's partner, Fiona Harvey, 32, says the former champion amateur boxer has her full support because "he loves his dog as much as anyone would love his son". "I don't haveaproblem with what Ronnie has done," Ms Harvey said from her parents' Barmera home yesterday. I would hope he would do the same for our kids in similar circumstances."
She said their two-year-old daughter, Kloe, and 11 week-old-son, Kobi, were concerned about their father, who does odd jobs around the district. "Kloe is missing her dad big time and I wish this all never happened, that he could just come back home to us," Ms Harvey said.
Mr Gilbertson's mother, who did not want to be named, said her son had bought the dog for company after his father died eight years ago. He had "made an oath" to protect Max whatever happened - and he was following through on that now.
That meant hiringalawyer and spending more than $6000 fighting the Grant District Council, which issuedadestruction order against Max in May after he seriously injuredaneighbour's dog. The council dismissed Mr Gilbertson's appeal on August 14, saying the dog was "unduly dangerous" because he had also previously fought and injured other dogs and, in 2005, had killed two sheep atafarm near his home.
Max remained on death row at the Animal Welfare League in Mt Gambier, and was to have been put down last Monday afternoon. With justafew minutes alone to say goodbye to his friend, and determined to uphold his oath, Mr Gilbertson did the only thing he could think of - he busted Max out. Usingapair of wire cutters he had smuggled into the depot, Mr Gilbertson cut Max free from his enclosure, grabbed him and ran. He has not been seen since, although it is understood he may have fled interstate.
Posted by Unknown | at 1:11 AM |4comments
Labels: news .com .au
စကော့ တလန်နိုင်ငံ အာဘာဒင်းမြို့ ကစတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဇင်ယော်ငှက်တစ်ကောင်ဟာအမြဲလာရောက်
ပြီးအာလူးကြော်ထုတ်တစ်ထုတ်ခိုးယူလေ့ ရှိပါတယ်တဲ့ ...
အင်မတန်အကင်းပါးတဲ့ ထိုဇင်ယော်ဟာဆိုင်ရှင်သတိမထားမိတဲ့ အချိန်ကိုစောင့် နေပြီးအခွင့် ရတာနဲ့ 
ဒိန်ခဲအနံ့ အရသာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အာလူးကြော်ထုတ်ကို ချီပြီးအမြန်ပြန်ထွက်သွားတော့ တာပါပဲ...
ဆိုင်အပြင်ရောက်တာနဲ့ ထိုအစာထုတ်ကိုနှုတ်သီးဖြင့် ထိုးဆိတ်ဖွင့် ပြီးတစ်ခြားငှက်တွေကပါလာရောက်
အဲဒီလိုဆိုင်ထဲကအာလူးကြော်ကိုနှိုက်ချီယူတာဟာယခုလဆန်းပိုင်းကစခဲ့ တာပါ...စကော့ တစ်လန်ပြည်၊
အဲဒီနေ့ ကစပြီးသူဟာနေ့ စဉ်အမြဲလိုလိုလာရောက်ပါတော့ တယ်...ပြီးတော့ ယူတိုင်းလည်းအာလူးကြော်
ထုတ်တစ်မျိူးတည်း၊တံဆပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲယူလေ့ ရှိပါတယ်တဲ့ ....
အခုတော့ မြို့ ခံလူတွေကဒီငှက်လာနှိုက်သမျှကိုပိုက်ဆံပေးနေကြပါတယ်...ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ သူ
အောက်က short clip ကလေးကတော့ တစ်ကယ်ပဲလား animated လုပ်ထားတာပဲလားတော့ မသိ
ရပါဘူး....ဒါပေမယ့် ကြည့် ရတာတော့ ရယ်စရာပါပဲ....
Posted by Unknown | at 1:08 AM |3comments
အသက်က ၁၇ နှစ် ....သတ်ခဲ့ တာကအယောက် ၃၀ ....အားလုံးယောင်္ကျားတွေချည်းပဲ....
အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိအမျိူးသမီး( ကောင်မလေး)တစ်ဦးဟာအမျိူးသားပေါင်းအယောက် ၃၀ ကိုဓါး
ဖြင့် ထိုးခုတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ မှုဖြင့် အဖမ်းခံခဲ့ ရပါတယ်...
သူမအသက် ၁၅ နှစ် ကစပြီးနှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းလူပေါင်းသုံးဆယ်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်လို့ ဝန်ခံထွက်
ဆိုခဲ့ တာမို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ အံ့ သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့ ရပါတယ်....
သူမအနေနဲ့ အသက်ပြည့် ပြီးလူကြီးတစ်ယောက်အဖြစ်တရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ပြီးအ
ရွယ်မရောက်သေးသူကလေးသူငယ်အဖြစ်သာအပြစ်ပေးခံရရန်ယခုကဲ့ သို့ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့် မှီ
ကျူးလွန်ခဲ့ သောလူသတ်မှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများထံဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်...
ဇာတိဘရာဇီးနိုင်ငံမြို့ တော်ဆောပေါလို မြို့ တွင် သူမ၏သားကောင်အဖြစ်အမျိူးသားများကိုပိုက်ဆံအ
တွက်၊လက်စားချေရန်အတွက် သူတို့ ကျူးလွန်ခဲ့ သောမတရားမှုများကိုပြန်လန်ပေးဆပ်စေရန်အတွက်
တို့ ကြောင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါတယ်...
သူမ သတ်ဖြတ်ခဲ့ တဲ့ အမျိူးသားတွေရဲ့ စာရင်းကိုရွတ်ဆိုပြနေတဲ့ အချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ နာမည်အဆိုးဆုံး၊
လူအမြောက်အများကိုတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည့် ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်ရာဇ၀င်
တွင်တော့ မယ့် ကောင်မလေးဟာပြုံးပင်ပြုံးပြခဲ့ ပါသေးတယ်တဲ့ ....
သူမကသေနတ်ကိုင်ဖို့ ၊ပစ်ဖို့ သာသတ္တိမရှိတာ ဓါးလောက်တော့ ကိုင်ရဲပါတယ် လို့ ရဲတွေကိုဝင့် ကြွား
” ကျွန်မ မိသားစုကိုဆက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲအောင်မလုပ်တော့ ဘူးလို့ ကတိပေးထားခဲ့ လို့ အခုလိုအသက်
၁၈ နှစ်မပြည့် မှီဝန်ခံ ခဲ့ တာ ပါ.....” လို့ သူမကပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်....
နဲ့ ပက်ခဲ့ လို့ အဲဒီိလူကိုဓါးနဲ့ ခုတ်ပြီးသတ်ဖြတ်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ကတော့ သူမဘာကြောင့် အခုလိုလူတတွေကိုဆက်ကာဆက်ကာသတ်နေခဲ့ တယ်
ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပါဘူးတဲ့ .....
ဆက်စပ်ပါတ်သက်မှုတွေအရတော့ သူမရဲ့ ငယ်ရွယ်ပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့ ရုပ်သဏ္ဍာန်ကြောင့် လူဆိုးဂိုဏ်း
ခေါင်းဆောင်တွေကလူတွေကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ဖို့ သူမကိုငှားရမ်းစေခိုင်းခဲ့ တယ်လို့ ယူဆနေကြပါ
တယ်...သူမကို ဆောပေါလို မြို့ ကလမ်းပေါ်မှာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ ရန်ပွဲတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးခဲ့ အပြီးအခု
လိုလူအများသတ်ခဲ့ တဲ့ အကြောင်းဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ တာပါ....
ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့ မှုခင်းဇတ်လမ်းရုပ်သံပြပွဲရဲ့ အစီစဉ်တာဝန်ခံကိုအဲဒီအစီအစဉ်ကိုလူတွေပိုပြီးကြည့် လာ
အများသတ်ဖြတ်မှုပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးတုန်လှုပ်အံ့ သြခဲ့ ရပါတယ်....
အဲဒီမှုခင်းဇတ်လမ်းရုပ်သံအစီအစဉ်ရဲ့ တာဝန်ခံကရဲဝန်ထမ်းဟောင်း Wallace Souza ဖြစ်ပြီးသူ့ ရဲ့ အစီ
အစဉ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ အဆင့် မြင့် လူဆိုးဖမ်းအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးပြကွက်များကြောင့် အောင်မြင်ကျော်
သူနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များကသူ့ ရဲ့ ဇတ်လမ်းရိုက်ကူးရေးကင်မရာသမားများကိုရာ
ဇ၀တ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ အချိန်နဲ့ နေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ ရပြီးနောက်သူ့ ကိုထိုအမှုတွေရဲ့ နောက်
ကွယ်ကနေကြိုးကိုင်စီမံခန့် ခွဲတယ်လို့ သံသယဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်....
သူကတော့ လူသတ်မှုတွေအပြင်သူ့ ကိုစွပ်စွဲထားချက်တွေဖြစ်တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကား
မှု ၊ မှုခင်းမျက်မြင်သက်သေများကိုခြိမ်းချောက်ခြင်းနဲ့ လက်နက်များတရားမ၀င်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းတို့ ကိုငြင်း
သူ့ ရဲ့ သားဖြစ်သူလည်းအဆိုပါအမှုများနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံခဲ့ ရသူ ၁၅ ဦးထဲမှာတစ်ဦးအပါအ၀င်
Girl sells herself to save classmate
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ လေးစားရတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံမှကျောင်းသူလေးတစ်ဦးဟာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ သူ့ ရဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ အသက်ကိုကယ်
တင်ကူညီချင်လို့ အဆိုပါသူငယ်ချင်းမလေးအတွက်ဆေးကုသဖို့ ကုန်ကျမည့် စားရိတ်ငွေ ပေါင်စတာလင်
၁၅၀၀၀ ( ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ ခန့် ) ပေးဆပ်ကူညီနိုင်မယ့် မည်သူ့ ကိုမဆိုလက်ထပ်ပါ့ မည်ဟုသူမကိုယ်
တရုတ်နိုင်ငံရှန်တုံ ပြည်နယ် ဒေဂျိူး မြို့ ကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ အသက် ၂၂ နှစ်အ
ရွယ်ရှိ Dan Dan အမည်ရှိတဲ့ ကျောင်းသူမလေးကအခုလို ကြေငြာခဲ့ တာပါလို Guangzhou နေ့ စဉ်သ
သူမရဲ့ သူငယ်ချင်း Zhang Yuemei ဟာ encephalomyelitis လို့ ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောမ
ကြီးချွတ်ယွင်းတဲ့ ရောဂါခံစားနေရတယ့် လို့ ဆေးစစ်ချက်များအရသိခဲ့ ရပါတယ်...
ဆိုယင်တော့ သူမဟာဘာမှမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ ပဲအကြောများအားလုံးသေကာအိပ်ယာထဲမှာတစ်သက်
” သူမရဲ့ မိဘတွေဟာငွေကြေးမပြည့် စုံတဲ့ သာမာန်လယ်သမားတွေပါ...သူတို့ အနေနဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျ
များမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှုနဲ့ နောက်ထပ်ဆက်လက်ကုသစောင့် ရှောက်မှုအတွက်ကုန်ကျစားရိတ်တွေကိုမ
တတ်နိုင်ရှာကြပါဘူး...” လို့ ကရုဏာရှင်မလေး Dan Dan ကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
သူမအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအတွက်ဆေးကုသဖို့ ကုန်ကျစားရိတ် ဒေါ်လာ ၂၄၀၀၀ လှူဒါန်းပေးမယ့် 
မည်သူ့ ကိုမဆိုလက်ထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ဝေဖန်လေကန်သူများကတော့ သူမဟာသူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ ဒုက္ခအခက်အခဲကိုအသုံးချပြီးငွေကြေးချမ်း
သာတဲ့ ယောကျာင်္းကိုအပိုင်ဖမ်းချင်တာပါလို့ စွပ်စွဲကြပါတယ်...
ဒါပေမယ့်Jinan Qilu ဆေးရုံကခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးကတော့ သူမရဲ့ အပြုအမူကိုအားပေး
ထောက်ခံခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ...
သူငယ်ချင်းအတွက်ဒီလိုဆေးကုပေးချင်တဲ့ စိတ်ထားရှိတာကိုကမွန်မြတ်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါနော်...
တစ်ချိူ့ များဘာမှသွေးမတော်သားမစပ်တာမပြောနဲ့ မိဘ၊ညီအစ်ကိုမောင်နှမအရင်းတွေတောင်
Dan Dan, 22, who studies atauniversity in Dezhou, Shandong province, made the offer online, reports Guangzhou Daily.
Her friend Zhang Yuemei has been diagnosed with encephalomyelitis,adisease of the brain and spinal chord.
She has no money for the treatment she needs and without which she will deteriorate intoavegetative state.
"Her parents are all farmers, who are unable to afford sky-high surgery fees and follow-up treatment expenses," explained Dan Dan.
She says she will marry any man prepared to donate the equivalent of £15,000 to cover Zhang's medical treatment.
Critics have accused her of using her friend's plight to findawealthy husband - but she is being supported by the chief surgeon at Jinan Qilu Hospital.
Posted by Unknown | at 1:38 AM |3comments
ဒီနေ့ ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ဝက်တုပ်ကွေးကစလို့ ကမ္ဘာ့ အဓိကရောဂါများကိုရုရှားနိုင်
ငံသားများသိပ်ခံစားရကြောင်းသတင်းများတွင်မပါသည့် အကြောင်းအရင်းကတော့ ရုရှားများသည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်အခြေခံသည့် ယောဂအကျင့် ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ခုံခုံမင်မင်ဖြင့် ကျင့် ကြသော
ကြောင့် ဖြစ်သည်ကိုထူးဆန်းဖွယ်ရာတွေ့ ရှိလိုက်ရပေသည်...
အသင်စာရှုသူအပေါင်းလည်း၎င်းရုရှားများကဲ့ သို့ ယောဂအကျင့် များစွဲစွဲမြဲမြဲကျင့် ၍သက်
ဒါယောကကျင့် စဉ်ကတော့ဆ၀ါဆန ကျင့် စဉ်ပါတဲ့ ...
ဒါကတော့ကျင့် စဉ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကူးအပြောင်းမှာအနားယူတဲ့ သဘောမျိူး
ဖြစ်စေတဲ့ဗာလာဆန ကျင့် စဉ်ပါ...ရုရှားကဆရာကတော့ ပိုပြီးတော့ 
ဒီတံတားပုံစံခန္ဓာကိုယ် ကျင့် စဉ်ကတော့ ဦးနှောက်နဲ့ စိတ်ကိုတည်ငြိမ်
စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ ...professional yoga master
ထက်တောင် ကိုရုရှားကပိုပြီးကြာကြာကျင့် နိုင်တယ်တယ်နော်...
ဒီကျင့် စဉ်ကတော့ ကျောရိုးနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲကအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို
အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးသလိုဖြေလျော့ စေပါသတဲ့ ....
ဒီကျင့် စဉ်ကြောင့် ရုရှားကလူ့ မင်းသားတွေကျန်းမာရေးကောင်းနေတာ
ဒီကျင့် စဉ်ကိုကျင့် ယင်ခါးနာ၊ကျောနာပျောက်ပြီးအလွယ်တစ်ကူအိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့ ...
သန်စွမ်းစေတယ်လေ....လင်းပိုင်ယောဂကျင့် စဉ်ပါတဲ့ ....
စောင့် ယင်းနဲ့ ကိုလေ့ ကျင့် နိုင်ပါတယ်...
ဆလမ်ဗာဆန အကျင့် စဉ်ပါတဲ့ ...ခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်း၊ခြေထောက်
ခြေကျင်းဝတ်၊ပေါင်ခြံအရင်းပိုင်းတွေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နောက်ပိုင်းတွေကိုပြေလျော့ 
စေမယ့်မာလာဆန ကျင့် စဉ်ပါတဲ့ ....သူတို့ ရုရှားတွေပဲစံချိန်တင်
ကျင့် နိုင်တာပေါ့ ...
လှပစေမယ်...ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ် ဆိုတဲ့ 
ခိုယောဂ ကျင့် စဉ်ပါတဲ့ ...ပျော်ပျော်နေသေခဲဆိုတာ
ပျော်ပျော်ပါးပါး ယောဂ ကျင့် သူများတိုးပွားနိုင်ပါစေသော်....
Posted by Unknown | at 1:06 AM |2comments
တရုတ်နိုင်ငံကအာဂ ၉၁ နှစ်ဘိုးဘိုး.....
တရုတ်နိုင်ငံကအသက် ၉၁ နှစ်ရှိ ဘိုးဘိုးတစ်ဦးပါ....
သူ့ လူမျိူး ....လူငယ်၊လူရွယ်လေးတွေတောင်လိုက်လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူးနော်....
This is from the series "And can you do this?”
ဒီလောက်ကတော့ လွယ်ပါတယ်ပေါ့ .....
အားပါးပါး...ပျော့ ပျောင်းတဲ့ သူ့ အကြောလျော့ နည်းလေလား....
ဒီလိုကြမ်းပေါ်ချထားတဲ့ အကြွေစေ့ ကို....
တစ်ကယ့် ကို incredible မယုံကြည်နိုင်လောက်စရာ ၉၁ နှစ်ဘိုးဘိုးပါပဲ....
Posted by Unknown | at 12:46 AM | 1 comments
Labels: photos : collection
ဆက်ပြီးမခံစားနိုင်တော့ လို့ ပါ....
မာရသွန်မိန့် ခွန်းကြောင့် ဘာသာပြန်သူတောင်သတိလစ်ရလောက်အောင်ပြောသူ
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးကဒါဖီရဲ့ ကုလသမဂ္ဂမှာပြောကြားခဲ့ တဲ့အာပေါင်အာရင်းသန်သန်နဲ့ 
ဒါပေမယ့် အဆိုးတစ်ကာ့အဆိုးဆုံးကတော့ သူ့ ရဲ့ မိန့် ခွန်းကိုဘာသာပြန်ရတဲ့ သူခမျာမှာသူ့ ရဲ့ လေ
လုံးထွားမှုတွေနဲ့ မဆုံးနိုင်တဲ့ စကားကြောကြောင့် ပင်ပန်းလွန်းလို့ သတိလစ်လဲကျသွားခဲ့ ရပါတယ်တဲ့ ...
အလွန်ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ ထိုသူခမျာ ကဒါဖီမိန့် ခွန်းပြောနေခဲ့ သာ တစ်နာရီနဲ့ ဆယ့် ငါးမိနစ်အ
ကြာ ( ၇၅ မိနစ်အကြာ ) မှာတော့ ” ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှဆက်မခံစားနိုင်တော့ ပါဘူး...
( ဆက်မလုပ်နိုင်တော ပါဘူး...) ” ဆိုပြီးအသံလွင့် နေတဲ့ မိုက်ကရိုဖုံးကနေငိုယိုပြီးပြောခဲ့ ရပါတော့ 
အားအင်ကုန်ခန်းပြီးဆက်လက်ဘာသာမပြန်နိုင်တော့ တဲ့ သူ့ နေရာကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအာရပ်ဌာန
စိတ်ရဲ့ ဌာနမှူး Rasha Ajalyaqeen က၀င်ရောက်ပြီးကဒါဖီရဲ့ နောက်ဆုံးမိနစ် ၂၀ မိန့် ခွန်းကိုဆက်
လက်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့ ရပါတယ်တဲ့ ....
” သူ့ ရဲ့ ဘာသာပြန်သူဟာသတိလစ်ပြီးတော့ ကို ရုတ်တရက်လဲကျသွားတာပါပဲ...ဒါဟာဒီကုလသမဂ္ဂမှာ
နှစ်ဆယ့် ငါးနှစ်တာအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ တဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်ပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးခြင်းပါပဲ....”
လို့ အာရပ်ဘာသာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဘာသာပြန်က New York Post သတင်းစာကိုပြောပြခဲ့ 
ကဒါဖီဟာညီလာခံမှာဘာသာပြန်ပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂကခန့် ထားတဲ့ အာရပ်ဘာသာပြန် ၂၅ ယောက်ထဲ
ကတစ်ယောက်ကိုအသုံးပြုရတဲ့ အစဉ်အလာကိုပယ်ဖျက်ပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ကသူပြောခဲ့ တဲ့ မိန့် ခွန်းကိုဘာ
သာပြန်အသံလွှင့် ဖို့ ထရီပိုလီမြို့ ( လစ်ဗျားနိုင်ငံမြို့ တော် ) ကနေသီးသန့် ဘာသာပြန်သူကိုခေါ်ဆောင်
လာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်လို့ ဘာသာပြန်ဌာနအမှုထမ်တွေကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူ့ ရဲ့ တစ်နာရီနဲ့ သုံးဆယ့် ခြောက်မိနစ်အကြာမိန့် ခွန်းမစတင်ခင်မှာသူ့ ရဲ့ သီးသန့်English နဲ့ 
Franceဘာသာပြန်သူတွေသာနားလည်မယ့် အထူးဘာသာစကားနဲ့ မိန့် ခွန်းပြောမှာမို့ သူတို့ ကိုခေါ်ယူ
အသုံးပြုရတာပါလို့ အကြောင်းပြခဲ့ ပေမယ့် တစ်ကယ့် တစ်ကယ်သူပြောခဲ့ တာကစံချိန်မှီအာရပ်ဘာသာ
စကားသာဖြစ်တယ်လို့ ဘာသာပြန်သူတွေကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
” ဒီကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဘာသာပြန်အဖွဲ့ ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံး၊အတော်ဆုံးပါ..ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံခေါင်း
ဆောင်တွေအားလုံးနီးပါသူတို့ ကိုပဲသဘောကျနှစ်ခြိုက်အသုံးပြုကြပါတယ်...ပြီးတော့ အကြောင်းတစ်စုံ
တစ်ရာဖြစ်ခဲ့ ယင်တောင်မှ ( ဘာသာပြန်လွဲချော်သွားလို့ ပါဆိုပြီး ) ကျွန်တော်တို့ ဘာသာပြန်တွေကိုအ
ပြစ်ပုံချလို့ ရပါတယ်...” လို့ အခြားဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကသတင်းစာကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ကုလသမဂ္ဂကိုသူအာဏာစတင်ရရှိခဲ့ တဲ့၁၉၆၉ ခုနှစ်ကတည်းကတစ်ခါမှမလာရောက်ခဲ့ ဘူးတဲ့ ကဒါဖီ
ကလက်ရေးနဲ့ ရေးမှတ်ထားတဲ့ အ၀ါရောင်မှတ်စုစာရွက်တွေဆီကနေဖတ်ပြတဲ့ သူ့ ရဲ့ မိန့် ခွန်းထဲမှာအစ္စ
ရေးနိုင်ငံ၊တာလီဘန်အကြမ်းဖက်သူပုန်အဖွဲ့ ၊၀က်တုပ်ကွေးရောဂါအကြောင်းနဲ့ ဂရင်နေဒါကိုအမေရိကန်
တို့ ကျူးကျော်မှုအကြောင်းတွေကိုပြောဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်...
သူကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ကြီးကိုလည်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် ကတည်းကစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့ တဲ့ စစ်ပွဲပေါင်း ၆၅ ခုကိုတားဆီး
ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ တာကြောင့် အကြမ်းဖက်ကောင်စီ(အဖွဲ့ ကြီး ) လို့ အမည်ပြောင်းသင့် ကြောင်း ပြင်းထန်စွာ
အခြားအာရပ်ဘာသာစကားဘာသာပြန်တစ်ယောက်ကလည်းသတိလစ်လဲကျသွားခဲ့ တဲ့ ဘာသာပြန်သူ
ရဲ့ ဒုက္ခကိုထောက်ပြဝေဖန်သွားခဲ့ ပါသေးတယ်...
” သူကမိန့် ခွန်းပြောတာရှင်းလင်းပြတ်သားအောင်ပြောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး....သူပြော
တော့ ဘာသာပြန်ရတဲ့ သူဒုက္ခရောက်တာပေါ့ ...တစ်ဆိုကျွန်တော်တောင်သူ့ ထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်
ပြောဆိုနိုင်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်....” လို့ အဆိုပါဘာသာပြန်ဝန်ထမ်းကပြောခဲ့ ပါတယ်...
ကုလသမဂ္ဂမှာမိန့် ခွန်းပြောသူတွေဟာသူတို့ မိန့် ခွန်းတွေကို ၁၅ မိနစ်မျှသာပြောဖို့ ကန့် သတ်ထားပေ
မယ့် လေကြောရှည်တဲ့ ကဒါဖီရဲ့ ( တစ်နာရီခွဲကျော်ကြာ) မိန့် ခွန်းအပြီးမှတော့ ညီိလာခံခန်းမထဲမှာကိုယ်
စားလှယ်တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိနေပါတော့ တယ်တဲ့ ....
ဒါပေမယ့် သူ့ ရဲ့ မိန်းခွန်းကတော့ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာပြောကြားခဲ့ တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ကျူးဘားသမ္မတဖီဒယ်
ကက်စထရိုရဲ့ မာရသွန်မိန့် ခွန်းလေးနာရီခွဲလောက်တော့ မကြာနိုင်ခဲ့ ရှာပါဘူး....
၁၉၅၇ ခုနှစ်တုံးကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ် VK Krishna Menon ဟာ ပါကစ္စတန်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့ 
တဲ့ ကက်ရ်ှမီးယားအရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှစ်နာရီမျှကြာအောင်မိန့် ခွန်းပြောဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ်တဲ့ ....
ကျွန်တော်တို့ ရွှေပြည်ကြီးကသွားလေသူဘဘကြီးနှစ်ဦးလည်းတစ်ခါမိန့် ခွန်းပြော၊သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
လုပ်ရင် ခြောက်နာရီကျော်ကြာအောင်စံချိန်တင် ကာ Talkie ပွားတတ်ခဲ့ ဖူးပါကြောင်း....
ဒါက daily mail ကဖော်ပြထားတဲ့ မူရင်းပါ...
Posted by Unknown | at 12:15 AM | 1 comments
Iranian shops warned not to display female mannequins withoutahijab
( ဒါပေမယ့် သူတို့ ကလည်းရအောင်တော့ ရသလောက်...ဖော်သေးတာပဲနော်...)
ဟောဒီလို အ၀တ်ဆိုင်၊စူပါမာ့ ကက်တွေက အရုပ်တွေတောင် ဦးခေါင်းကိုဖုံးတဲ့ ပုဝါနဲ့ 
အီရန်နိုင်ငံမှရဲတပ်ဖွဲ့ ကအမျိူးသမီးရုပ်ထုများနမူနာပြတဲ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုအဆိုပါအရုပ်များကို hijab
လို့ ခေါ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်းပုဝါမပါပဲဆိုင်မှာပြသားမထားဖို့ နဲ့ ထိုအရုပ်များရဲ့ ဖုထစ်စွင့် ကားတဲ့ ရှုိုက်ဖို
ကြီးငယ်အစိတ်အပိုင်းများ ( အောင်မယ်လေး...ရေးလိုက်ရတာ...) ကိုသိသာပေါ်လွင်အောင်ပြသမထား
မိစေဖို့ သတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ....
ပြီးတော့ အမျိူးသမီးအ၀တ်အစားတွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်းပုဝါ၊ အောက်ခံဘောင်းဘီများကိုလည်းအမျိူး
သားများရောင်းချခြင်း ( အဲဒီဆိုင်တွေမှာအမျိူးသားအရောင်းစာရေးထားခြင်း ) ကိုလည်းတားမြစ်ထား
ပါတယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်....
ကနေတားဆီးကာကွယ်ခြင်းနဲ့ အစ္စလာမ်မစ်ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုအတွက်ပြဌာန်းလိုက်နာစေမှုတို့ အ
တွက်ပြလုပ်တဲ့ စီမံချက်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်...
အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာနဲ့ မညီညွတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားလာတာဟာ လက်ရှိ
သမ္မတ Mahmoud Ahmadinejad စတင်ပြီးအာဏာရလာခဲ့ တဲ့၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းကပါပဲ....
” သိသာထင်ရှားတဲ့ အမျိူးသမီးများရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုဖေါ်ပြထားတဲ့ နမူနာပြအရုပ်များနဲ့ 
ဦးခေါင်းဆောင်းပုဝါမပါတဲ့ အမျိူးသမီးခေါင်းပိုင်းအရုပ်များ ကိုအများပြည်သူမြင်တွေ့ နိုင်အောင်အရောင်း
ဆိုင်တွေမှာပြသထားခြင်းကိုထိရောက်စွာတားမြစ်သည်....” လို့ ရဲ တပ်ဖွဲ့ ကထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်မှာ
သတင်းထောက်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရယခင်ကအခုလိုပြုလုပ်ခဲ့ တဲ့ စီမံချက်တွေဟာနွေဦးရာသီတစ်
ခုတည်းသာရည်ရွယ်ပေမယ့် မနှစ်ကစတင်ခဲ့ တဲ့ ဒီစီမံချက်ကတော့့အမျိူးသမီးများကိုယ်ကြပ်ဘောင်းဘီ
၀တ်စားဆင်ယင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချိူးဖောက်သူတွေကိုတော့ များသောအားဖြင့် 
သတိပေးစကားပြောကြားကာလွှတ်ပေးလေ့ ရှိပြီး၊ထပ်မံကျူးလွန်သူများကိုတော့ တရားရုံးမှာအရေးယူ
ခံရကာစာရိတ္တပြုပြင်ရေးလမ်းညွှန်သင်တန်းများပို့ ချပေးပါတယ်တဲ့ ....
သြော်...ယောကျာင်္းများကတော့ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီးအမျိူးသမီးများကျတော့ အရုပ်တောင်လုံအောင်
ခေါင်းဆောင်းရမယ် ....အ၀တ်ပတ်ထားရမယ်တဲ့ ဗျာ....
အံ့ ရောပဲ....အဲဒီလိုဘာသာအယူရှိတဲ့ ငကြောင်များကိုယူတဲ့ မြန်မာ....
ဘဘကြီးများမုန်းတဲ့ ဘီဘီစီကတော့ ဒီသတင်းကိုဒီလိုဆိုထားသပေါ့ ....
Iranian police have warned shopkeepers not to display female mannequins withoutahijab, or showing bodily curves. Display of bow ties and neckties, and the sale of women's underwear by men are also banned, the police said.
"Using unusual mannequins exposing body curves and with heads without hijabs [Muslim veils] are prohibited to be used in the shops," police said inastatement.
Posted by Unknown | at 1:42 PM |4comments
Labels: news : bbc.co.uk
ကမ္ဘာကျော်တင်းနစ်မယ် ရှာရာပိုဗာကိုဖြတ်ကျော်လို့ အင်တာနက်မှာသူလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံကိုအများဆုံး
ဒေါင်းလုပ်၊ပြီးကြည့် ရှု ခံရတဲ့ ကမ္ဘာ့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအားကစားမယ် အလှလေးပါပဲ....
Allison Stokke ပါတဲ့ ....California ပြည်နယ်က တုတ်ထောက်ခုန်အားကစားမယ်လေးပေါ့ ....
၂၀၀၄ ခုနှစ်က သူတို့ ပြည်နယ်ကအထက်တန်းကျောင်းအားကစားပွဲတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ တဲ့ သူလေးရဲ့ 
ဓါတ်ပုံကိုအင်တာနက်မှာစပြီးတင်လိုက်ကတည်းကနာမည်ကျော်သွားခဲ့ တာပေါ့ ....
သူလေးကတော့ ရုပ်ရည်ရူပကာယကြောင့် ကျော်ကြားတာထက်ပင်ကိုယ်အရည်အချင်း၊စွမ်းရည်
ကြောင့် ကျော်ကြားတာကိုပိုပြီးအလိုရှိပါသတဲ့ ....
ဒါပေမယ့် ...အခုတော့ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပုရိသတွေ
(အများဆုံးကသူတို့ တွေပဲပေါ့ ) ရဲ့ အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံရသူလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကြည့် ရှုနိုင်ပါတယ်....
Allison Stokke from California is considered to be the hottest female athlete. Google confirms.
There's no question she is an amazing athlete and very pretty girl, but do you know, how she became so famous on the Internet?
The story began in 2004, when someone posted toaweb site her photos taken during high school track meet.
Many other sites quickly picked up the image. Next day she received near 1000 messages on her social network site and YouTube video of her being interviewed became very popular.
She wasn’t very happy because of suchasuccess, but soon realized that she could do nothing with it.
Here’s Allison Stokke,ayoung, pretty athlete girl whose picture got on the internet while she was preparing to compete in the pole vault duringahigh school track meet. Then, it didn’t take long for her photo to be picked up and to travel through the World Wide Web. It wasn’t done on purpose but now she’s quite popular and she said that she didn’t want to be known only for her looks but also for her performances. And it seems that she isavery good athlete too. She held seven national records; she setaschool freshman record at the Pac-10 Championships, was also qualified for the NCAA Indoor Championships and in the outdoor season her jump was the second-best performance in school history.
ကဲ...နောက်ဆုံးပိတ် ဗီဒီယိုကလစ်ကလေးလဲကြည့် နိုင်ပါသေးတယ်....
Posted by Unknown | at 4:03 AM |5comments
သူတို့ ဆီကအရက်ပုန်းရောင်းသူကိုအပြစ်ပေးပုံ..... Tho...
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်လေးများ.... Interesting Fact...
ကာယဗလ...မယ် လှလှ များ... The Terrible Beauty
တံတွေးရောင်းသည့် မြို့ 
နံရံမှာပေါ်တဲ့ ခရစ်တော်.... Jesus appears on factor...
သူတို့ လက်ထဲရောက်တဲ့ တိုင်းပြည်....
ထိုင်းနိုင်ငံမှသက်တော်ရှည်ဆရာတော်ကြီးက ကမ္ဘာ့ အသက်...
၂၀၁၀ မှာထုတ်လုပ်မယ့် နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့် မြင့် ( Hyb...
အရပ်ရှည်လွန်းသူအတွက်တီထွင် လိုက်တဲ့ ကား....
Korea's 'worst building in the history
တံခါးမရှိ၊သော့ မခတ်တဲ့ ရွာ.... Shri Shanidev: Th...
ယီမင်နိုင်ငံမှအသက် ၁၂နှစ်အရွယ်သတို့ သမီးလေးမီးဖွား...
ပေါင်စတာလင်ငွေ ၅သန်း ( ဒေါ်လာ ၈သန်း ၃သိန်း ကျော် ) ...
Man eats live snakes overabeer
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးခွေး.....
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးသိုး....World's most expensive...
မြွေဟောက်လိုလျှာနှစ်ခွနဲ့ .... Tongue splitting
သူတို့ အတွက်မွေးနေ့ လက်ဆောင်.....
ရုရှားမှာလဲဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို.....( ၃ )
Indian man inflates balloons with his ears
Alien Baby Stumps experts
ကမ္ဘာ့ ဈေးအကြီးဆုံးဆံပင်ညှပ်ခပေးပြီးဆံပင်ညှပ်သူ....
ဟုတ်မှဟုတ်ပါ.မလား... That’s not real... is it?
သွေးမျက်ရည်ကျတဲ့ ကောင်ကလေး.... The U.S. teenager ...
ရုရှားမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်အစ်ကို.....( ၂ )